Yaa u Dirsaday Hawsha? – Rasaasa News
Feb 20, 2010 Aqoonyahanku, qoraalkan, yaa u dirsaday hawsha
Aqoonyahanku waa Aabaha iftiinka ilbaxnimada, haggaaga indhoolayaasha ka duwa hoggaga madoow iyo hantaaqada turunturada nafta haliga, waa habaaga biyaha oonka ummada ka tira, mar walbana waxaa laga fishaa ku hagida ummadiisa wanaaga iyo horumarka. Somalidu waxay dhahdaa gabyaagu waa seef labo af leh, qoraaguna waa la mid, sababtuna waa aqoonta oo kolba sida uu u sharxo ay ummadu u qaadan waana midaas mid keenta in ay aqoonleydu doodo si ay wax dhab ah isugu raacaan.
Qoraalkan oo aanu ka helay qoraa in badan qoraaladiisa ku soo bandhigay boggaga internetka, kaas oo uu fikirkiisu u badan yahay dhinaca nabada iyo dhismaha ummada Somalida Ogadeeniya, ayaanu maanta ka helay qoraal dheer oo ku saabsan dhacdooyinka siyaasadeed ee dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaan hubaa kolka qoraalkan ay ummadu akhrisato in ay su,aalo iyo doodo badan ka keeni doonaan, waana mid loo baahan yahay in ay doodi furanto kana doodo aqoon yahanka Somalida Ogadeeniya danaha dadkooda iyo dalkooda.
Hadaba, si ay doodaasi u furanto Aqoonyahanku kama uusan gabanine, waxaa uu soo raaciyey e-mailkiisa, bogga rasaas.com, oo aan waxba qarinin waxaa uu diyaar u yahay in uu soo daabaco doodaha ka imankara qoraalkan iyo ku kasta oo na soo gaadha.
Qoraalka oo aad u dheer ayaanu ka dhignay PDF ee halkan ka gal